ရေခဲလူသား (စင်ကြယ်ငြိမ်း) | လမ်းအိုလေး
January 14, 2012 by lanolay	Leaveacomment
သူပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေဟာ သူ့အပေါ်နားမှာ အဖြူရောင် တိမ်ဆုပ်တွေလိုမျိုး ပေါ်လာတယ်။ ကာတွန်းစာအုပ်တွေမှာ ပြောတဲ့စကားကို ပုံစာထိုးပြသလိုမျိုးပေါ့။ လေထဲက စကားလုံးတွေကို ကျွန်မတကယ်ကို မြင်နေရတယ်။ သူက ရေခဲနေတဲ့သူ့ရဲ့လက်ချောင်းနဲ့ အဲဒါတွေကို ဝှေ့ယမ်းပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်မ ဘာဆက်ပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်နေတယ်။ ရုတ်တရက် ရှက်သလိုကြောက်သလိုဖြစ်လာပြီး အဲဒီမှာ ဒီအတိုင်း ရပ်နေမိတယ်။ ရေခဲလူသားက ကျွန်မမျက်လုံးထဲကို ကြည့်ရင်း ပြုံးလိုက်တယ်ထင်တယ်။
ရေခဲလူသားတစ်ယောက်ကို ကျွန်မလက်ထပ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မသူ့ကို နှင်းလျှောစီးစခန်းတစ်ခုက ဟိုတယ်တစ်ခုမှာ စတွေ့ခဲ့တာ။ ဟုတ်တယ်လေ.. အဲဒီနေရာက ရေခဲလူသားတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံဖို့ကောင်းတဲ့ နေရာတစ်ခုပဲမဟုတ်လား။ ဟိုတယ်ဧည့်ခန်းမှာ လူတွေပြည့်ကျပ်နေပေမယ့် ရေခဲလူသားကတော့ မီးလင်းဖိုနဲ့ဝေးတဲ့ အခန်းထောင့်ကခုံမှာ တစ်ယောက်ထည်း ထိုင်ပြီး စာတစ်အုပ်ကို အသံတိတ်ဖတ်နေလေရဲ့။
ကြည့်စမ်း။ အဲဒါ ရေခဲလူသားပဲ ကျွန်မသူငယ်ချင်းက ရေရွတ်လိုက်တယ်။
အဲဒီအချိန်တုံးကတော့ ရေခဲလူသားဆိုတာ ဘာမှန်းကို မသိခဲ့တာ။ ကျွန်မသူငယ်ချင်းလဲ ဒီလိုပါပဲ။ သူ့တစ်ကိုယ်လုံး ရေခဲတွေချည်းပဲ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ရေခဲလူသားလို့ ခေါ်တာနေမှာ။ တစ္ဆေတစ်ကောင်ဒါမှမဟုတ် ကူးစက်ရောဂါတမျိုးမျိုးအကြောင်း ပြောနေသလိုမျိုး သူမက အလေးအနက်ပုံမျိုးနဲ့ ကျွန်မကို ပြောတယ်။ ရေခဲလူသားက အရပ်ရှည်ရှည်။ အသက်ကတော့ ငယ်ပုံရတယ်။ သူ့ရဲ့ ၀ိုင်ယာကြိုးလို ခပ်တုတ်တုတ်ဆံပင်တွေထဲမှာ အရည်မပျော်သေးတဲ့နှင်းတွေနဲ့ တူတဲ့ အဖြူရောင်အကွက်တွေ တွေ့နေရတယ်။ သူ့ရဲ့ ပါးရိုးတွေက ငေါထွက်နေတယ်။ အေးခဲနေတဲ့ ကျောက်သားလိုပေါ့။ သူရဲ့လက်ချောင်းတွေမှာလည်း ဘယ်တော့မှ အရည်မပျော်မယ့်ပုံရှိတဲ့ ရေခဲတွေ သီးနေလေရဲ့။ အဲဒါတွေကလွဲလို့တော့ ရေခဲလူသားဟာ ရိုးရိုးလူသားလိုပါပဲ။ သူ့ကို ရုပ်ရည်ချောမောတယ်ရယ်လို့တော့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်လို့တော့ ထင်ရတယ်။ သူ့ရဲ့ မျက်လုံးတွေကြောင့် ကျွန်မရင်ထဲမှာ စူးခနဲဖြစ်သွားတယ်။
သူ့ရဲ့အကြည့်က ဆောင်းမနက်ခင်းတွေမှာ ရေခဲနေတဲ့ နေရာလေးတွေကို ဖြတ်လာတဲ့ အလင်းရောင်လို တိတ်ဆိတ်ပြီး ကြည်လင်နေတယ်။ အရုပ်ဆန်တဲ့ တစ်ကိုယ်လုံးမှာ အဲဒီနေရာတစ်ခုပဲ အသက်ဝင်နေလေရဲ့။
နောက်တစ်နေ့မနက်ကျတော့လည်း ရေခဲလူသားကို အဲဒီနေရာမှာပဲ တွေ့ရပြန်တယ်။ မနေ့က ပုံစံအတိုင်းပဲ သူ့စာအုပ်ကို သူဖတ်နေတယ်။ ကျွန်မ နေ့လယ်စာစားဖို့ စားသောက်ခန်းထဲသွားတဲ့အခါ၊ ညနေဘက် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ နှင်းလျှောစီးရာက ပြန်လာတဲ့အခါ အဲဒီနေရာမှာ သူရှိနေတုံးပဲ။ စာအုပ်ကလည်းမပြောင်းဘူး။ စာဖတ်နေတဲ့ပုံစံကလည်း ဒီအတိုင်းပဲ။ နောက်နေ့ကျတော့လည်း အဲဒီပုံစံပဲ။ နေ၀င်ခါနီးအချိန်ကနေ ညဉ့်နက်လာတဲ့အထိ ပြတင်းပေါက်အပြင်က ဆောင်းဥတုရှုခင်းတွေလိုပဲ သူ့ခုံမှာ သူတိတ်တဆိတ် ထိုင်နေခဲ့တယ်။
အကြောင်းတစုံတရာမရှိရင် သူစိမ်းတွေရှေ့မှာ ကျွန်မ ရှက်သလို ရွံ့သလိုဖြစ်တတ်တယ်။ ကျွန်မနဲ့ မသိတဲ့ လူတွေကိုစကားပြောတဲ့ အလေ့အထလည်း မရှိခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ရေခဲလူသားနဲ့တော့ ဘာဖြစ်ဖြစ် စကားပြောကြည့်မယ်လို့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီညက ဟိုတယ်မှာ ကျွန်မအဖို့ နောက်ဆုံးညပဲ။ ဒီတခါ မပြောဖြစ်ရင် ရေခဲလူသားနဲ့ ဘယ်တော့မှ စကားပြောခွင့်ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှင် နှင်းလျှောမစီးဘူးလားခရီးသွားဟန်လွှဲမေးတဲ့ဟန်မျိုး တတ်နိုင်သမျှ ဖမ်းထားပြီး ကျွန်မမေးလိုက်တယ်။
ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ဆူဆူညံညံအသံကြားလိုက်မိသလိုပုံစံမျိုးနဲ့ သူက သူ့မျက်နှာကို ကျွန်မဘက် ဖြည်းဖြည်းချင်း လှည့်လာတယ်။ အဲဒီမျက်လုံးတွေနဲ့ ကျွန်မကို စိုက်ကြည့်တယ်။ ပြီးတော့ ခေါင်းကို အေးအေးဆေးဆေး ယမ်းပြတယ်။ ကိုယ် နှင်းလျှောမစီးတတ်ဘူး သူကပြောလိုက်တယ်။ ဒီမှာထိုင်ပြီး စာဖတ်၊ ပြီးတော့ နှင်းတွေကို ကြည့်နေရတာကိုပဲ ကိုယ်သဘောကျတယ်။
ထိုင်ပါဦးလား သူကဆက်ပြီးမေးတယ်။ မင်း ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်မဟုတ်လား။ ရေခဲလူသားဆိုတာ ဘယ်လိုပါလိမ့်လို့ သိချင်နေတယ်မဟုတ်လား ပြောရင်းရယ်လိုက်တယ်။ မကြောက်ပါနဲ့။ ကိုယ်နဲ့ စကားပြောရုံနဲ့တော့ မင်းအအေးမမိနိုင်ပါဘူး
ကျွန်မတို့ ဧည့်ခန်းထောင့်က ဆိုဖာမှာ ဘေးချင်းကပ်ရက်ထိုင်ရင်း ပြတင်းပေါက်အပြင်ဘက်မှာ နှင်းပွင့်တွေအချပ်လိုက်အချပ်လိုက် မျောလွင့်နေတာကို ကြည့်နေမိကြတယ်။ ကျွန်မ ကိုကိုး အပူတစ်ခွက်မှာပြီး သောက်လိုက်တယ်။ ရေခဲလူသားကတော့ ဘာမှမသောက်ဘူး။ သူက စကားပြောရဆိုရမယ့်နေရာမှာ ကျွန်မထက်တော့ သာပုံမရဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်မတို့အကြားမှာ နှစ်ယောက်စလုံးအတွက် အဆင်ပြေမယ့် ပြောစရာဆိုစရာတစ်ခုခုလည်း ရှိမနေခဲ့ဘူးလေ။ စစချင်းတော့ ကျွန်မတို့ ရာသီဥတုအကြောင်း ပြောကြတယ်။ နောက်တော့ ဟိုတယ်အကြောင်းရောက်သွားတယ်။ ရှင်ဒီမှာ တစ်ယောက်တည်းလားကျွန်မက ရေခဲလူသားကို မေးလိုက်တယ်။ အင်းသူက ပြန်ဖြေတယ်။ သူက နှင်းလျှောစီးရတာကို ကြိုက်သလားလို့ ကျွန်မကို ပြန်မေးတယ်။ သိပ်အကြိုက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်မက ပြောလိုက်တယ်။သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ကျွန်မဒီကို လာဖြစ်တာ။ ကျွန်မဖာသာကျွန်မတော့ စီးခဲပါတယ်။
ကျွန်မသိချင်တာတော့ အများကြီးပဲ။ သူ့တကိုယ်လုံးကို တကယ်ပဲ ရေခဲနဲ့လုပ်ထားသလား။ သူဘာတွေစားသလဲ။ နွေရာသီဆို သူဘယ်မှာနေသလဲ။ သူ့မှာ မိသားစုရှိသလား။ အဲဒါမျိုးတွေပေါ့။ ဒါပေမယ့် ရေခဲလူသားက သူ့အကြောင်းသူ ဘာမှမပြောဘူး။ ကျွန်မကလည်း သူ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာတွေ မမေးမိအောင် သတိထားလိုက်တယ်။
ကျွန်မတော့ လိုက်မမီနိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်မက စိတ်ရှုပ်ရှုပ်နဲ့ ပြောလိုက်တယ်။ ကိုယ့်အကြောင်းတွေ အကုန်သိနေတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်ရှေ့မှာ ကျွန်မ မနေတတ်မထိုင်တတ် ဖြစ်နေရတယ်။ ကျွန်မအကြောင်းတွေ ရှင်က ဘာဖြစ်လို့ ဒီလောက်တောင်သိနေရတာလဲ။ ရှင်က သူများစိတ်တွေကို သိနေတာလား။
မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်သူများစိတ်တွေကို မသိပါဘူး။ ရေခဲလူသားက ပြောတယ်။ အလိုလိုနေရင်းနဲ့ သိတာ။ ရေခဲထဲကို စိုက်ကြည့်ရသလိုပဲ။ မင်းကို ကိုယ်စိုက်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ မင်းအကြောင်းတွေကို မြင်တွေ့နေရတော့တာပဲ။
ကျွန်မက သူ့ကို မေးလိုက်တယ်။ ရှင်ကျွန်မရဲ့ အနာဂတ်ကိုကော မြင်ရလား
အနာဂတ်ကိုတော့ ကိုယ်မမြင်ရဘူး။သူက ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်ပြောတယ်။ ကိုယ် အနာဂတ်ကို စိတ်လည်းမ၀င်စားဘူး။ တိတိကျကျဖြစ်အောင် ပြောရရင် အနာဂတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို ကိုယ်သဘောမပေါက်နိုင်ဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရေခဲတွေမှာ အနာဂတ်ဆိုတာ မရှိလို့ပဲ။ သူ့မှာ သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားတဲ့ အတိတ်ပဲရှိတယ်။ ရေခဲဟာ အရာအားလုံးကို ဒီနည်းအတိုင်းပဲ ကြည့်နိုင်တယ်။ သူတို့ရဲ့ ရှင်သန်မှုလိုပဲပေါ့။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြတ်ပြတ်သားသားပဲ။ ဒါပဲ။ ဒါဟာ ရေခဲရဲ့ အနှစ်သာရလို့ပဲ ပြောရမယ်။
ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မက ပြောပြီး ပြုံးလိုက်တယ်။ အဲလိုပဲ ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်မလည်း တကယ်တော့ ကျွန်မရဲ့ အနာဂတ်ကဖြင့် ဘယ်လိုဆိုတာ မသိချင်ပါဘူး။
မြို့ဆီ ပြန်ရောက်လာတော့လည်း ကျွန်မတို့ မကြာခဏ တွေ့ဖြစ်ကြတယ်။ တဖြေးဖြေးနဲ့ ကျွန်မတို့ ချိန်းတွေ့ ဖြစ်ကြတယ်။ ကျွန်မတို့ နှစ်ယောက် ရုပ်ရှင်ရုံလည်းမသွား ကော်ဖီဆိုင်တွေလည်း မထိုင်ဖြစ်ဘူး။ စားသောက်ဆိုင်တွေဘက်တောင် မလှည့်ဖြစ်ကြဘူး။ ရေခဲလူသားက ပြောရလောက်အောင် ဘာမှ မစားမသောက်ဘူး။ ကျွန်မတို့တွေ ပန်းခြံထဲက ခုံတန်းတွေမှာ ထိုင်ကြတယ်။ ဟိုအကြောင်း ဒီအကြောင်း ပြောကြတယ်။ ရေခဲလူသား ကိုယ်တိုင်ရဲ့ အကြောင်းကလွဲလို့ပေါ့။
ဘာဖြစ်လို့လဲ။ တစ်ခါတော့ ကျွန်မက မေးလိုက်တယ်။ ရှင့်အကြောင်း ရှင်ဘာကြောင့် မပြောတာလဲ။ ကျွန်မရှင့်အကြောင်း ခုထက် ပိုသိချင်တယ်။ ရှင့်ကို ဘယ်မှာမွေးခဲ့သလဲ။ ရှင်မိဘတွေက ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ။ ဘာကြောင့် ရှင်ရေခဲလူသားဖြစ်လာရတာလဲ…။
ရေခဲလူသားက ကျွန်မကို ခဏလောက် စိုက်ကြည့်နေတယ်။ နောက်တော့ သူ့ခေါင်းကို ယမ်းလိုက်တယ်။ ကိုယ်မသိဘူး အသာအယာပြောပေမယ့် သူ့လေသံက ပြတ်သားတယ်။ လေထဲကို တိမ်ဖြူဖြူလေးတွေ တက်လာတယ်။ တခြားအရာတွေအားလုံးရဲ့ အတိတ်ကို ကိုယ်သိတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်မှာတော့ အတိတ်မရှိဘူး။ ကိုယ့်ကိုဘယ်မှာ မွေးသလဲ ကိုယ်မသိဘူး။ ကိုယ့်မိဘတွေဟာ ဘယ်လုံပုံမျိုးလဲဆိုတာလည်း ကိုယ်မသိဘူ။ ကိုယ့်မှာ မိဘတွေရှိသလားဆိုတာကိုတောင် ကိုယ်မသိဘူး။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အသက်ဘယ်လောက်ရှိပီလဲဆိုတာတောင် ကိုယ်မသိဘူး
ကျွန်မ ရေခဲလူသားနဲ့ လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်မအမေနဲ့ အမက အပြင်းအထန်ကန့်ကွက်ကြတယ်။ နင် လက်ထပ်ဖို့ ငယ်ပါသေးတယ်သူတို့က ပြောကြတယ်။ နောက်ပြီး နင်သူ့အကြောင်းလည်း ဘာမှ သိတာမဟုတ်ဘူး။ သူဘယ်မှာမွေးတယ်၊ ဘယ်တုံးက မွေးတယ်ဆိုတာတောင် သိတာမဟုတ်ဘူး။ နင်ဒီလိုလူမျိုးကို လက်ထပ်လိုက်ရင် အမျိုးတွေကို ငါတို့ဘယ်လိုပြောရပါ့မလဲ။ နောက်ပြီး သူက ရေခဲလူသားနော်၊ မတော်လို့ သူအရည်ပျော်သွားခဲ့ရင် နင်ဘယ်လိုလုပ်မယ် စိတ်ကူးထားလဲ။ လက်ထပ်တယ်ဆိုတာ ဘ၀တစ်ခုလုံးနဲ့ ရင်းပြီးလုပ်ရတာမျိုးဆိုတာ နင်သဘောပေါက်ပုံမရပါဘူး
အခန်းသေးသေးလေးတစ်ခန်း ကျွန်မတို့ ငှားလိုက်တယ်။ ရေခဲလူသားက အသားရေခဲရိုက်တဲ့စက်ရုံတစ်ရုံမှာ အလုပ်လုပ်တယ်။ ဘယ်လောက်အေးအေး သူက ခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ အလုပ်ဘယ်လောက်လုပ်လုပ် မောတယ်ရယ်လို့လည်း မရှိဘူး။ ဒါကြောင့် သူ့အလုပ်ရှင်ကတော့ သူ့ကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ လစာလည်း တခြားလူတွေထက် ပိုပေးထားတယ်။
ကျွန်မတို့နှစ်ယောက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေခဲ့ကြရတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း မနှောက်ယှက်ဘဲ ဘယ်သူ နှောက်ယှက်တာမှလည် မခံပဲနဲ့ပေါ့။……
ဒါနဲ့ တစ်နေ့တော့ ကျွန်မယောက်ျားကို ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မတို့ ခရီးထွက်ရအောင်။ အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်သွားအောင်ပေါ့
ခရီးဟုတ်လားရေခဲလူသားကပြောတယ်။ ကိုယ်တို့က ဘာဖြစ်လို့ ခရီးသွားရမှာလဲ။ မင်းလည်း ဒီမှာကိုယ်နဲ့နေရတာ ပျော်နေတာပဲ မဟုတ်လား
အဲဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်မက ပြောလိုက်တယ်။ ကျွန်မပျော်ပါတယ်။. ဒါပေမယ့်် နည်းနည်း ငြီးသလို ဖြစ်နေတယ်။ အဝေးကြီးကို သွားချင်နေတယ်။ ကျွန်မဘယ်တုံးကမှ မမြင်ခဲ့ဘူးတာတွေကို မြင်ကြည့်ချင်နေမိတယ်။ ရှုတဲ့လေက အစအသစ်ဖြစ်မယ့်နေရာမျိုးပေါ့။ ရှင်နားလည်ပါ့မလားတော့ မသိဘူး။ နောက်ပြီး ကျွန်မတို့ ဟန်နီးမွန်းလည်း မထွက်ရသေးဘူးလေ။ ကျွန်မတို့မှာ စုထားတာရှိတာပဲ။ ရှင့်မှာလည်း ခွင့်ရက်တွေရှိနေတယ်။ လုပ်ပါ။ ဒါ ကျွန်မတို့ တစ်နေရာသွားပြီး အပန်းဖြေဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပဲ
ရေခဲလူသားက အေးစက်စက် သက်ပြင်းတစ်ခုချလိုက်တယ်။ အဲဒါဟာ ချွင်ခနဲမြည်ပြီး လေထဲမှာပဲ အေးခဲသွားတော့တယ်။ သူက လက်ချောင်းတွေကို ဒူးပေါ်မှာ ယှက်ထားလိုက်တယ်။ အေးလေ၊ မင်းအရမ်းသွားချင်နေတယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ်မကန့်ကွက်တော့ပါဘူး။ မင်းပျော်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ကိုဖြစ်ဖြစ် သွားပါ့မယ်ကွာ။ ဒါနဲ့ မင်းက ဘယ်နေရာကို သွားချင်တာလဲ။
တောင်ဝန်ရိုးစွန်းကို သွားရင် ဘယ်လိုနေမလဲကျွန်မက ပြောလိုက်တယ်။ ရေခဲလူသားအနေနဲ့ အေးတဲ့နေရာဆို စိတ်ဝင်စားမှာပဲလို့တွက် ပြီး တောင်ဝန်ရိုးစွန်းကို သွားဖို့ ပြောလိုက်တာ။ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် ကျွန်မလည်း အဲဒီနေရာကို သွားချင်ပါတယ်။ သားမွေးကုတ်ကြီးတွေလည်း ၀တ်ကြည့်ချင်တယ်။ ပြီးတော့ ပင်ဂွင်းတွေရယ်၊ အလင်းမျှင်တွေရောပေါ့ ကျွန်မတွေ့ဖူးချင်တယ်။
ကျွန်မအဲသလိုပြောလိုက်တော့ ကျွန်မယောက်ျားက ကျွန်မမျက်လုံးထဲကို မျက်တောင်တောင်မခတ်ပဲ စိုက်ကြည့်နေလေရဲ့။ သူ့အကြည့်ကြောင့်ကျွန်မခေါင်းထဲကို ရေခဲအချွန်တစ်ခုနဲ့ ထိုးလိုက်သလိုတောင် ခံစားရတယ်။ ခဏတော့ သူတိတ်ဆိတ်နေတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ စိတ်လှုပ်ရှားနေပုံရတဲ့အသံနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။ ကောင်းပြီလေ။ မင်းသွားချင်တယ်ဆိုလည်း ကိုယ်တို့တောင်ဝန်ရိုးစွန်းကို သွားကြတာပေါ့။ မင်းအဲဒီကို သွားချင်တာတော့ သေချာတယ်နော်။
အချိန်တွေကုန်လွန်သွားတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တောင်ဝန်ရိုးစွန်းသွားဖို့ စိတ်ကူးရတာကို ကျွန်မနောင်တရလာတယ်။ ဘာကြောင့်မှန်းတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက တောင်ဝန်ရိုးစွန်းဆိုတဲ့ စကားကို ပြောလိုက်ကတည်းက ကျွန်မယောက်ျားဟာ ပြောင်းလဲသွားသလိုပဲ။ သူ့မျက်လုံးတွေဟာ ပိုပြီး တောက်ပလာတယ်။ သူ အသက်ရှုထုတ်တဲ့လေကလည်း ပိုပြီး ဖြူဖွေးလာသလိုပဲ။ လက်ချောင်းတွေမှာလည်း ရေတွေပိုခဲလာတယ်။ ကျွန်မကိုလည်း စကားမပြောသလောက်ကို ဖြစ်လာတယ်။ ဘာမှလည်း မစားမသောက်တော့ဘူး။ သူဖြစ်ပျက်နေတာတွေကြောင့် ကျွန်မမှာ အတော့်ကို တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားရတယ်။
ကျွန်မတို့ မသွားခင် ငါးရက်အလိုမှာ ကျွန်မလည်း စိတ်ထိန်းပြီး ပြောလိုက်တယ်။ တောင်ဝန်ရိုးစွန်းသွားဖို့ ကိစ္စကို မေ့လိုက်ရအောင်။ အခုကျွန်မပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့ အဲဒီမှာ သိပ်အေးမှာပဲဆိုတာ တွေးမိတယ်။ အဲဒါ ကျွန်မတို့ ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး။ တခြားသာမန်နေရာတစ်ခုကို သွားတာက ပိုကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်။
ဥရောပဘက်ဆိုရင်ကော ဘယ်လိုလဲ။ စပိန်..ဟုတ်တယ် စပိန်ကို သွားကြမလား။ ကျွန်မတို့ ၀ိုင်သောက်ကြမယ်။ စပိန်ထမင်းပေါင်းစားကြမယ်။ နောက်ပြီး ကျွဲရိုင်းသတ်တာကြည့်ကြမယ်လေ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မယောက်ျားကတော့ ကျွန်မပြောတာကို ကြားပုံတောင်မရဘူး။ အပြင်ဘက်ကို မိနစ်အတော်ကြာ ငေးကြည့်နေတယ်။ ဟင့်အင်း၊ ကိုယ်တော့ စပိန်ကို မသွားချင်ဘူး။ စပိန်က ကိုယ့်အတွက် သိပ်ပူလိမ့်မယ်။ ဖုန်လည်းထူတယ်။ အစားအစာတွေကလည်း စပ်တယ်။ တောင်ဝန်ရိုးစွန်းသွားဖို့ ကိုယ်လက်မှတ်တောင် ၀ယ်ထားပြီးပြီ။ သားမွေးကုတ်တွေ၊ သားရေဖိနပ်တွေလည်း မှာထားပြီးပြီ။ အဲဒါတွေတော့ အလဟသ အဖြစ်မခံနိုင်ဘူး။ အိုကွာ..ဒီအချိန်ရောက်မှတော့ မသွားလို့ကို မဖြစ်တော့ဘူး။
ဒါပေမယ့် ကျွန်မ ရေခဲလူသားကို ချစ်တယ်။ ကျွန်မငိုတဲ့အခါငိုမိတယ်။ ကျွန်မမျက်ရည်တွေ သူ့ပါးပေါ်ကျတဲ့အခါ သူနိုးလာပြီး ကျွန်မကို ဖက်ထားတယ်။ ကျွန်မအိပ်မက်ဆိုးတစ်ခုမက်တယ်လို့ ကျွန်မပြောလိုက်တယ်။
အဲဒါက အိပ်မက်ပါကွာသူကပြောတယ်။ အိပ်မက်တွေဟာ အတိတ်ကလာတာ။ သူတို့ဟာ အနာဂတ်မဟုတ်ဘူး။ သူတို့က မင်းကို တုပ်နှောင်လို့မရပါဘူး။ မင်းကသာ သူတို့ကို တုပ်နှောင်ထားတာ။ မင်းသဘောပေါက်မလားတော့ မသိဘူး။
ဘ၀င်မကျပေမယ့် အင်းလို့ ကျွန်မဖြေလိုက်တယ်။
ခရီးစဉ်ကို ဖျက်ပစ်ဖို့ အကြောင်းပြချက်ကောင်းကောင်း ကျွန်မရှာမတွေ့ခဲ့ဘူး။ နောက်ဆုံးတော့ ကျွန်မယောက်ျားနဲ့ ကျွန်မ တောင်ဝန်ရိုးစွန်းသွားမယ့် လေယာဉ်ပေါ်တက်ခဲ့ရတော့တယ်။ လေယာဉ်မယ်တွေကလည်း အေးတိအေးစက်နဲ့။ ပြတင်းပေါက် အပြင်ကို ကျွန်မကြည့်နေပေမယ့် တိမ်တွေကထူလွန်းတော့ ကျွန်မဘာကိုမှ မမြင်ရဘူး။ ခဏနေတော့ ပြတင်းပေါက်မှာ ရေတွေခဲလာတယ်။ ကျွန်မယောက်ျားကတော့ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တိတ်တဆိတ် ဖတ်နေလေရဲ့။ အပျော်ခရီးထွက်လာရတဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုမျိုး တစိုးတစိတောင် ကျွန်မ မခံစားရဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားအတိုင်း လိုက်ပြီး ပြုမူဆောင်ရွက်နေရသလိုပဲ။ တောင်ဝန်ရိုးစွန်းရောက်လို့ လေယာဉ်ပေါ်က ဆင်းလိုက်တာနဲ့ ကျွန်မယောက်ျားရဲ့ ကိုယ်က ဆတ်ခနဲဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒါက မျက်တောင်တခတ်လောက်သာ ကြာတယ်။ သူ့ရဲ့အမူအယာကလည်း ဘာမှမထူးခြားဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မကတော့ သတိထားမိလိုက်တယ်။ ရေခဲလူသားရဲ့ အတွင်းက တစ်စုံတစ်ခုဟာ တိတ်တဆိတ် ဒါပေမယ့် ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ခါသွားတယ်ဆိုတာကိုပေါ့။ သူက ရပ်လိုက်ပြီး ကောင်းကင်ကို ကြည့်လိုက်တယ်။ နောက်တော့ သူ့လက်တွေကို ကြည့်တယ်။ သက်ပြင်းတစ်ချက် ရှိုက်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျွန်မကို ကြည့်ပြီး ပြုံးပြတယ်။ သူကပြောတယ်။ ဒါမင်းအလည်အပတ်သွားချင်တဲ့ နေရာလား
အင်းလေ၊ ဒီနေရာပဲ။ ကျွန်မက ပြောလိုက်တယ်။
ဆောင်းရာသီ ရောက်လာပြီကျွန်မယောက်ျားက ပြောတယ်။ဒီမှာ ဆောင်းရာသီက သိပ်ရှည်တယ်။ အဲဒီအချိန်အတောအတွင်း ဘယ်လေယာဉ် ဘယ်သင်္ဘောမှ ဒီကိုမလာဘူး။ အားလုံးရေတွေခဲနေပြီ။ နွေဦးပေါက်တဲ့အထိ ငါတို့ ဒီမှာနေရလိမ့်မယ်
ကျွန်မရင်ထဲမှာ ဘာခံစားချက်မှမရှိတော့ဘူး။ ကျွန်မကိုယ်တိုင်ရဲ့ အနွေးဓာတ်တောင် ပျောက်ဆုံးလာနေပေါ့။ တခါတလေ ကျွန်မဆီမှာ အနွေးဓာတ်ရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတာတောင် ကျွန်မမေ့လျော့နေရဲ့။ ကျွန်မငိုလိုက်မိရင် ရေခဲလူသားက ကျွန်မပါးပြင်ကို နမ်းတယ်။ ကျွန်မရဲ့ မျက်ရည်တွေ ရေခဲဖြစ်သွားတော့တယ်။ သူက အဲဒီမျက်ရည်အခဲလေးတွေကို လက်နဲ့ယူပြီး သူ့လျှာပေါ်တင်လိုက်တယ်။ ကိုယ်မင်းကိုဘယ်လိုချစ်တယ်ဆိုတာ ကြည့်စမ်းပါကွာသူကပြောတယ်။ သူအမှန်ကို ပြောနေတာပါ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်နေရာက တိုးဝင်လာမှန်းမသိတဲ့လေက သူ့ရဲ့ စကားလုံးဖြူဖြူတွေကို အတိတ်ဆီ တိုက်ခတ်သယ်ဆောင်သွားတော့တယ်။
Mirrored from: Kanyan
Related Link: ICE MAN / HARUKI MURAKAMI
(Ice Man – Haruki Murakami. ဘာသာပြန် – စင်ကြယ်ငြိမ်း။)